Dhalista giraanta taabashada (inji)
Ball qoto dheer oo Groove ah oo dhalaya 6002
Shaqada ugu weyn ee xargaha giraangiraha waa xamuul qaadista waxayna siisaa hagitaan sax ah wareegga xarunta. Waa qayb aad muhiim u ah oo qaadi karta culeyska shucaaca iyo xamuulka xajmiga ah. Qaadista dhaqameed ee xargaha gawaarida gawaarida waxay ka kooban tahay laba qaybood oo isku dhafan. Rakibaadda, dufan, shaabadaynta iyo hagaajinta ciyaarta dhammaantood waxaa lagu sameeyaa khadka wax soo saarka gaariga.
Rullaluistemadka Taper sita 30306 Dhalista
Kubad is-toosin ah oo sita 2218
Is-waafajinta saa'idka kubbadda. Iswaafajinta kubbadaha is-le'eg waxay leeyihiin laba saf oo kubbado ah, waddo caan ah oo isdabajoog ah oo ku taal giraanta dibadda iyo laba waddo oo qoto dheer oo aan kala go 'lahayn oo ku taal giraanta gudaha. Waxay heli karaan iyagoo furan ama xiran.
Sare Sax Wheel Hub dhalista DAC34640037
Gawaarida gawaarida dhaqameedka ee caadiga ah waxay ka kooban yihiin laba qaybood oo goos goos ah ama kubbado kubbado ah. Kordhinta, saliida, xirashada iyo hagaajinta nadiifinta ee waarada ayaa dhamaantood lagu sameeyaa khadka wax soo saarka baabuurta.
Sare Sax Wheel Hub dhalista Automotive Front dhalista DAC34660037
Sax Wheel Hub saarista Automotive Front dhalista 38BWD12
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Sare ee Dhalista Gawaarida Hore ee BAH-0036
Hufnaan Sare Wheel Hub dhalista Automotive Front dhalista DAC35650035
Sare Sax Wheel Hub dhalista Automotive Front dhalista DAC38700038
Sax Wheel Hub saarista Automotive Front dhalista DAC40750039
Sax Wheel Hub saarista Automotive Front dhalista DU5496
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida MR992374